Unogona Kuramba Uine Mwero Paunoedzwa | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mingrelian Mongolian Moore Motu Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRomania Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuTaiwan Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
“Uve nomwero pakufamba naMwari wako.”—MIKA 6:8.
NZIYO: 48, 95
KUVA NEMWERO KUNOTIBATSIRA SEI KUTI . . .
tibudirire pamabasa atinoita musangano?
tirambe tichiita zvakanaka patinotsoropodzwa kana kuti patinorumbidzwa?
tiite zvisarudzo zvakanaka?
1-3. Muprofita wekuJudha akakundikana kuitei uye zvakaguma nei? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
PAITONGA Mambo Jerobhoamu, Jehovha akatuma mumwe muprofita wekuJudha kuti azivise mashoko emutongo kuna mambo iyeye weIsraeri ainge atsauka pakutenda. Muprofita uyu aizvininipisa akasvitsa mashoko aMwari, uye Jehovha akamudzivirira pakutsamwa kwaJerobhoamu.—1 Madz. 13:1-10.
2 Paaidzokera kumba, muprofita wacho akangoerekana asangana nemumwe murume akanga akwegura aigara kuBheteri. Murume wacho akanyepa kuti aiva nemashoko aibva kuna Jehovha. Akanyengedza muprofita uyu kuti asateerere zvaakanga arayirwa naJehovha zvekuti ‘asadya zvokudya kana kunwa mvura munyika yeIsraeri’ uye kuti ‘asadzoka nenzira yaakanga aenda nayo.’ Jehovha haana kufara nazvo. Paakazopinda munzira kuti aende kumba, muprofita wacho akasangana neshumba ikamuuraya.—1 Madz. 13:11-24.
3 Nei muprofita uyu aimbova nemwero akamhanyirira kubvuma kuenda nemurume iyeye aiva neunyengeri? Bhaibheri haritauri chikonzero chacho. Asi anogona kunge akakanganwa ‘kuva nomwero pakufamba naMwari.’ (Verenga Mika 6:8.) MuBhaibheri, kufamba naJehovha kunoreva kuvimba naye, kutsigira uchangamire hwake, uye kubvuma kutungamirirwa naye. Munhu ane mwero anonyatsoziva kuti anofanira kugara achitaura naBaba vake vemasimbaose uye vane rudo. Muprofita uyu aigona kubvunza Jehovha kuti zvaakanga amurayira zvakanga zvachinja here, asi Magwaro haaratidzi kuti ndizvo zvaakaita. Dzimwe nguva, isuwo tinofanira kuita zvisarudzo zvakakura uye panogona kunge pasina kujeka kuti toita zvipi. Kuratidza mwero tichitsvaga kutungamirirwa naJehovha kunotibatsira kuti tisaita zvikanganiso zvakakura.
4. Tichadzidzei munyaya ino?
4 Munyaya yakapfuura, takadzidza kuti nei kuva nemwero kuchiri kukosha kuvaKristu uye kuti kunosanganisirei. Asi zvii zvinogona kubudisa pachena kuti tine mwero here kana kuti hatina? Uye tingaitei kuti tirambe tiine mwero patinoedzwa? Kuti tipindure mibvunzo iyi, tichaongorora zvinhu zvitatu zvinogona kubudisa pachena kuti tine mwero here kana kuti hatina, uye tichaona kuti tingaratidza sei uchenjeri patinotarisana nezvinhu izvi.—Zvir. 11:2.
PANOCHINJA ZVINHU MUUPENYU HWEDU
5, 6. Bhazirai akaratidza sei kuti aiva nemwero?
5 Zvatinoita panochinja zvinhu muupenyu hwedu zvinogona kuratidza kuti tine mwero here kana kuti hatina. Dhavhidhi paakakoka Bhazirai, uyo akanga ava nemakore 80, kuti ave mumwe wemakurukota ake, Bhazirai anofanira kunge akafara zvikuru. Kubvuma kukokwa kwaizoita kuti arambe ari pedyo namambo. Asi Bhazirai akaramba. Akarambirei? Sezvo akanga akwegura, akaudza Dhavhidhi kuti aisada kuremedza mambo. Saka Bhazirai akati Dhavhidhi aende naKimhamu, uyo anogona kunge aiva mwanakomana wake.—2 Sam. 19:31-37.
6 Kuva nemwero kwakabatsira Bhazirai kuti aite chisarudzo chine musoro. Haana kuramba kukokwa naDhavhidhi nemhaka yekuti aitya kuzotadza kuita basa racho kana kuti aida hake kuzorora pasina chinomunetsa. Asi akaona kuti upenyu hwake hwakanga hwachinja uye akabvuma kuti pane zvimwe zvaakanga asingachakwanisi kuita. Haana kuda kuita zvinhu zvaaiona kuti akanga asingakwanisi. (Verenga VaGaratiya 6:4, 5.) Kana tikava nepfungwa dzekuda chinzvimbo, mukurumbira, kana kuonekwa, tinotanga kuzvikudza, kuita makwikwi uye tinopedzisira taora mwoyo. (VaG. 5:26) Asi kuva nemwero kunotibatsira kuti tishande pamwe chete nehama dzedu kuti tipe mbiri kuna Mwari uye tiite zvose zvatinogona kuti tibatsire vamwe.—1 VaK. 10:31.
7, 8. Kuva nemwero kungatibatsira sei kuti tisatanga kuzvivimba?
7 Kana munhu akapiwa chinzvimbo anobva avawo nemasimba akawanda, uye izvi zvinogona kuita kuti asava nemwero. Nehemiya paakanzwa nezvekutambura kwaiita vanhu muJerusarema, akanyengetera nemwoyo wese kuna Jehovha. (Neh. 1:4, 11) Jehovha akapindura munyengetero wake Mambo Atashasta paakamugadza kuti ave gavhuna wenharaunda yacho. Asi pasinei nechinzvimbo chake, upfumi hwake uye simba raaiva naro, Nehemiya haana kuvimba neruzivo rwake kana zvaaigona kuita. Akaramba achifamba naMwari. Akaramba achitsvaga kutungamirirwa naJehovha kuburikidza nekuverenga Mutemo waMwari. (Neh. 8:1, 8, 9) Nehemiya haana kushandisa simba rake kuti adzvinyirire vamwe, asi aivashumira achishandisa zvinhu zvake.—Neh. 5:14-19.
8 Muenzaniso waNehemiya unoratidza kuti kuva nemwero kunogona kutibatsira sei kuti tisazvivimba panochinja basa redu musangano kana kuti patinowedzerwa zvekuita. Achivimba neruzivo rwake, mukuru anogona kutanga kuita mabasa emuungano asina kunyengetera kuna Jehovha. Vamwe vanogona kutanga vaita chisarudzo vozonyengetera kuna Jehovha kuti akomborere chisarudzo chavo. Asi ikoko kuva nemwero here? Munhu ane mwero acharamba achiyeuka kuti zvaanogona kuita zvidiki chaizvo kana zvichienzaniswa nezvinoitwa naJehovha uye acharamba achiyeuka nzvimbo yake muurongwa hwaMwari. Pasinei nezvatinogona kuita, tinofanira kungwarira kuti tisazvivimba kunyanya patinenge tichiita zvinhu zvatakamboita kakawanda. (Verenga Zvirevo 3:5, 6.) Sevanhu vaMwari, hatifungi kuti kuva nemabasa atinoita musangano kunoita kuti tive nani pane vamwe vemumhuri medu kana kuti vemuungano, asi tinongoshanda pamwe chete sehama nehanzvadzi.—1 Tim. 3:15.
PATINOTSOROPODZWA KANA KURUMBIDZWA
9, 10. Kuva nemwero kunogona kutibatsira sei patinotsoropodzwa tisina chatatadza?
9 Zvinogona kuoma kuti tizvidzore patinotsoropodzwa pasina chatatadza. Hana aiwanzochema nekuti aigara achishungurudzwa nemukadzin’ina wake Penina. Hana aidiwa nemurume wake, asi akanga asina mbereko. Rimwe zuva paakanga achinyengetera ari patebhenekeri, Mupristi Mukuru Eri akamupomera kuti akanga akadhakwa. Asi pasinei nezvose izvi, Hana, uyo aiva nemwero, akazvidzora uye akaratidza ruremekedzo paakapindura Eri. Pane imwe nguva Hana akazopa munyengetero unobaya mwoyo wakanyorwa muBhaibheri. Wakazara nemashoko ekurumbidza, ekuonga uye anoratidza kuti aiva nekutenda.—1 Sam. 1:5-7, 12-16; 2:1-10.
10 Kuva nemwero kunogona kutibatsirawo kuti ‘tirambe tichikunda zvakaipa nezvakanaka.’ (VaR. 12:21) Munyika yaSatani vanhu vanowanzobatwa zvisina kunaka, saka tinofanira kurwisa kuti tisagumburwa nezvinoitwa nevanhu vakaipa. (Pis. 37:1) Zvinogona kutonyanya kutirwadza kana tikanetsana nevatinonamata navo. Munhu ane mwero achatevedzera Jesu. Bhaibheri rinoti: “Paakanga achitukwa, haana kutanga kutukawo . . . , asi akaramba achizviisa kune uya anotonga zvakarurama.” (1 Pet. 2:23) Jesu aiziva kuti kutsiva ndekwaJehovha. (VaR. 12:19) Saizvozvowo, vaKristu vanokurudzirwa kuzvininipisa uye ‘kusatsiva zvinokuvadza nezvinokuvadza.’—1 Pet. 3:8, 9.
11, 12. (a) Kuva nemwero kunotibatsira sei patinorumbidzwa zvakanyanya? (b) Kuva nemwero kunotibatsira sei pane zvatinoita uye pakusarudza zvekupfeka?
11 Kunyanya kurumbidzwa kunogona kutiisa pamuedzo wekusava nemwero. Funga zvakanaka zvakaitwa naEsteri zvinhu pazvakangoerekana zvachinja. Aiva tsvarakadenga uye akaita gore achizorwa mafuta anodhura kuti awedzere kutsvinda. Zuva nezuva aiwadzana nevasikana vakawanda vaibva munzvimbo dzese dzaitongwa nePezhiya, avo vaikwikwidzana kuti vadiwe namambo. Asi akaramba aine ruremekedzo uye akadzikama. Haana kubva atanga kudada nerunako rwake kunyange paakasarudzwa namambo kuti ave mambokadzi wake.—Est. 2:9, 12, 15, 17.
Kupfeka uye kuratidzika kwatinoita kunoratidza here kuti tinoremekedza Jehovha nevamwe, kana kuti kunoratidza kusava nemwero? (Ona ndima 12)
12 Kuva nemwero kunotibatsira kuti tipfeke, tiratidzike uye tizvibate zvine mutsigo. Tinofarirwa nevanhu kana tiri vanhu vakadzikama uye vanyoro kwete kana tichizvikudza kana kuita zvinhu zvekuda kuonekwa. (Verenga 1 Petro 3:3, 4; Jer. 9:23, 24) Zvatinotaura uye zvatinoita zvinobudisa pachena kuti tinozvikudza here kana kuti kwete. Semuenzaniso, tingataura tichiratidza kuti tine ropafadzo dzatiinadzo, kuti tinoziva zvinhu zvisingazivikanwi nevamwe kana kuti tinozivana nehama dziri kutungamirira. Kana kuti tingatsanangura zvinhu nenzira inoita kuti isu chete tirumbidzwe pamusoro pezvinhu zvatakaita pamwe chete nevamwe. Tinogona kutevedzera zvakare muenzaniso wakanaka waJesu. Aiwanzotaura zvinhu zviri muMagwaro echiHebheru. Aitaura saizvozvo kuti vanhu vaimuteerera vazive kuti zvaaitaura zvaibva kuna Jehovha kwete mupfungwa dzake kana pauchenjeri hwake.—Joh. 8:28.
13, 14. Kuva nemwero kunogona kutibatsira sei kuita zvisarudzo zvakanaka?
13 Tinogona kuratidza kuti tine mwero here kana kuti kwete panoitwa zvisarudzo. Muapostora Pauro paaiva muKesariya, muprofita Agabhasi akamuudza kuti kana akaenda kuJerusarema aizopedzisira asungwa. Aigona kutourayiwa. Hama dzakateterera Pauro kuti asaenda dzichityira kuti zvinhu zvaigona kuzomuipira. Asi izvi hazvina kuita kuti Pauro arege kuenda. Aisazvivimba uyewo aisatya zvekubva atadza kuita chimwe chinhu. Ainyatsovimba naJehovha uye akanga akagadzirira kupedza basa rake pasinei nekuti Jehovha aizobvumira kuti rimuendese kupi. Hama padzakaziva izvi, dzakaratidza kuva nemwero ndokurega Pauro achiita zvaainge asarudza zvekuenda kuJerusarema.—Mab. 21:10-14.
14 Kuva nemwero kunogona kutibatsirawo kuita zvisarudzo zvakanaka kunyange patinenge tisingakwanisi kuziva kana kudzora kuti zvinhu zvichafamba sei. Semuenzaniso kana tikapinda mubasa renguva yakazara, chii chichaitika kwatiri kana tikarwara? Ko kana tichifanira kubatsira vabereki vedu vakwegura? Tichazviriritira sei kana takwegura? Kunyange tikanyengetera kana kutsvakurudza zvakadii hatikwanisi kuwana mhinduro dzakazara dzemibvunzo yakadai. (Mup. 8:16, 17) Kuvimba kwatinoita naJehovha kuchatibatsira kuziva uyewo kubvuma kuti tine zvatisingakwanisi. Pashure pekutsvakurudza, kubvunza vamwe uye kunyengetera kuti Jehovha atitungamirire, tinofanira kuita chisarudzo chinoenderana nekutungamirirwa kwatinoitwa nemudzimu waMwari. (Verenga Muparidzi 11:4-6.) Tikadaro, Jehovha anogona kukomborera zvisarudzo zvedu kana kuti anogona kutibatsira kuchinja zvirongwa zvedu.—Zvir. 16:3, 9.
ZVATINGAITA KUTI TIVE NEMWERO
15. Kufungisisa nezvaJehovha kunotibatsira sei kuti tirambe tichizvininipisa?
15 Sezvo kuva nemwero kuine zvakawanda zvakwakanakira, tingaita sei kuti tiwedzere kuva nemwero? Ngatikurukurei nzira ina. Yekutanga, tinowedzera kuva nemwero uye kutya Jehovha patinofungisisa nezveukuru hwake uye chinzvimbo chake. (Isa. 8:13) Yeuka kuti tiri kufamba naMwari Wemasimbaose, kwete nengirozi kana nemunhu. Kuziva izvozvo kuchaita kuti ‘tizvininipise pasi poruoko rwaMwari rune simba.’—1 Pet. 5:6.
16. Kufungisisa nezverudo rwaMwari kuchatibatsira sei kuti tive nemwero?
16 Yechipiri, kufungisisa nezverudo rwaJehovha kuchatibatsira kuti tive nemwero. Muapostora Pauro akanyora kuti Jehovha akakomberedza nhengo dzemuviri wemunhu dzinokudzwa zvishoma “nokukudzwa kukuru kwazvo.” (1 VaK. 12:23, 24) Saizvozvowo, Jehovha anokoshesa mumwe nemumwe wedu pasinei nezvatisingakwanisi kuita. Haatienzanisi nevamwe kana kubva arega kutida patinokanganisa. Nemhaka yerudo rwaJehovha, tinogona kunzwa takachengeteka chero kwatinoshumira tiri.
17. Chii chinoitika kana tikadzidza kutarisa zvakanaka mune vamwe?
17 Yechitatu, tinowedzera kukoshesa zvatinoita mubasa raJehovha patinotevedzera Mwari pakutarisa zvakanaka mune vamwe. Pane kugara tichiedza kuonekwa kana kuudza vamwe zvekuita, tichatsvaga mazano kwavari togadzirira kuagamuchira. (Zvir. 13:10) Tichafara navo pavanogadzwa kuti vaite mamwe mabasa musangano. Uye ticharumbidza Jehovha patinoona kukomborera kwaari kuita ‘sangano rose rehama dzedu munyika.’—1 Pet. 5:9.
18. Kudzidzisa hana dzedu kungatibatsira sei kuti tiwedzere kuva nemwero?
18 Yechina, tichawedzera kuva nemwero patinoshandisa mazano ari muBhaibheri kuti tidzidzise hana dzedu. Tichava nemaonero akanaka kana tikadzidza kuona zvinhu semaonero anoita Jehovha. Kana tikagara tichidzidza shoko raMwari, tichinyengetera, uye tichishandisa zvatinodzidza, tinogona kusimbisa hana yedu zvishoma nezvishoma. (1 Tim. 1:5) Tinodzidza kutanga kufunga zvakanakira vamwe. Kana tikaita pedu, Jehovha anovimbisa kuti ‘achapedzisa kurovedzwa kwedu,’ achitibatsira kuva nemwero nehumwe unhu hwaanoda.—1 Pet. 5:10.
19. Chii chichatibatsira kuramba tiine mwero nokusingaperi?
19 Kuzvikudza kwakaitwa nemuprofita wekuJudha kamwe chete kwakaita kuti arasikirwe neukama hwake naMwari uye upenyu hwake. Asi munhu anogona kuramba aine mwero paanoedzwa. Mienzaniso yevashumiri vaJehovha vakatendeka inoratidza kuti izvozvo zvinoita. Patinofamba naJehovha kwenguva yakareba, tinofanira kuwedzerawo kuva nemwero. (Zvir. 8:13) Pasinei nezvatiri kuita iye zvino musangano raMwari, kufamba naJehovha iropafadzo isingaenzaniswi. Koshesa ropafadzo iyoyo, uye ramba uchiita zvaunogona kuti ufambe nemwero naJehovha nokusingaperi.
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA January 2017
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA January 2017